Dec142021 by Life NepaliNo Comments
के भयो प्रचण्डलाइ मन्चमै यसरी ध’रधरी रो‘ए ( भिडियो सहित)
Posted in रोजगार, समाचार
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकम ल दाहाल।। ‘प्रचण्ड’ बेला–बेला रुने गर्नुहुन्छ । गोहीका आँशु ख’साल्यो भन्दै धेरैले उल्टै गि ’ज्याउँछन् ।”“केहीले यो हि’प्नोटाइजर हो नेता कार्यकर्तालाई हि’प्नोटाइज गर्न आँशु खसाल्यो भन्ने गर्छन् शनिबारपनि उहाँले आँशु खसाल्नुभयो ।उहाँले आउने चुनावमा आफ्नो पार्टी एक नम्बर बन्ने दावी गर्दै भक्कानिनुभएको हो । शनिबार पार्टीको प्रदेश सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले आफूहरु फरक जातको भएको समते दावी गर्नुभयो ।”“हामी भनेको अलि अर्कै जात (वि’रासत) का मान्छे हौं,’ उहाँले भावुक हुँदै भन्नुभयो, ‘तर, हामी भेडासँग हिँड्दाहिँडदै्र भेडा जस्तै भयौं कि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ ।हामी भेडा होइनौं, हामी सिंह नै हौं।हामी सिंह जस्तो ग’र्जिनपर्छ सबै अआफ्नो ठाउँमा ग’र्जिऔं “आउने चुनावमा हामी एक नम्बर भएर देखाउने हो ।’प्रचण्डले आ’क्रामक ढंगले प्रस्तुत हुन पन
Sep202021 by Life NepaliNo Comments
Posted in रोजगार
टिकटक प्रयोगकर्ताका लागि खुसीको खबर छ । छोटो भिडियोका चर्चित चिनियाँ भिडियो प्ल्याटफर्मले आफ्ना प्रयोगकर्ताका लागि अब पैसा दिने भएको हो । छोटो समयमै स्थापित टिकटकले खासगरी चर्चित प्रयोगकर्ता र नयाँ प्रयोगकर्तालाई लक्षित गर्दै यस्तो सुविधाको घोषणा गरेको हो । बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीले आफ्नो नयाँ घोषणाको लागि करिब २४ अर्ब रुपैयाँ(२० करोड डलर)को कोष बनाउन लागेको जनाएको हो । यो सुविधाले रचनात्मक कन्टेन्टमार्फत प्रगतिको अवसर खोजिरहेका प्रयोगकर्तालाई सहयोग पुग्ने टिकटकले जनाएको छ । टिकटकका अनुसार उक्त कोषबाट यो बर्षको अन्त्यतिर नगद वितरण सुरु हुनेछ । विगतमा टिकटक प्रयोगकर्ताले लाइभ र ब्रान्डसँगको साझेदारीमार्फत मात्र आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था थियो । टिकटकको नयाँ घोषणाले आम्दानीको आधार तयार गर्ने भएपछि प्रयोगकर्ताप्रति यसको आकर्षण कायमै रहने अपेक्षा गरिएको छ । टिकटकको मापदन्ड
काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीले मनपरी नियुक्ति गरेको आरोप लगाउँदैआएका माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु नै भाइभतिजा र ज्वाईचेलाको नियुक्ति गर्न थालेका छन् ।अर्थमन्त्रालयको सचिवमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पमकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का सल्लाहकार रहेका प्राडा श्रीराम पौडेलका ज्वाईलाई लगेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एशियाली विकास बैंकको सल्लाहकारमा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत आफ्ना भान्जीज्वाई भीमकान्त न्यौपानेलाई पठाउने निर्णय आउनासाथ गरेका छन् । मन्त्री शर्माले लोकलाजको समेत बेवास्ता गर्दै ज्वाई न्यौपानेलाई मासिक १८ लाख तलव सुविधा पाउन एडीबीमा पठाउने निर्णय गरेका छन् ।ओली सरकार पदमुक्त हुने १५ दिनअघि उपसचिव रमेश अर्याललाई एडीबीको सल्लाहकारमा पठाउने निर्णय भएको थियो । तर शर्मा मन्त्री हुनासाथ उक्त निर्णय बदर गरियो । र, मन्त्री शर्माका ज्वाई न्यौपानेलाई पठाउने निर्णय गरिएको छ । यसअघि मुख्यसचिव डा. सोमल
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष कायम हुनुपर्ने बताएका छन् । आज बिहिबार बसेको प्रतितिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेसका सांसद जिपछिरिङ लामा अहिलेको वृद्ध भत्ता ७० वर्ष माथि उमेरलाई घटाएर ६५ वर्ष बनाउनु पर्ने बताएका हुन् । पहाडी भेगमा ६५ वर्षको मानिसले औषधि उपचार पाउन नसेको भन्दै सांसद लामाले बैठकमा भने , ‘वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष कायम गर्नुपर्‍यो’ । अहिले ७० वर्ष भन्दा माथिकालाई मासिक ४ हजार वृद्ध भत्ता सरकारले वितरण गर्दै आएको छ ।
।देबर भाउजु जंगलमा एस्तो काम गर्दै गरेको भेटियो कैद भयो यो एस्तो दृश्य ‘यो समाचारको पुरा भिडियो अन्तिममा”राखिएको छ हेर्नुहोला। आजकल नेपाली समाजमा थुप्रै का’रणहरुले डिभोर्सको घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । कतै तपाईले आफ्नो श्रीमतीलाई खुसि पर्न नसकेर तपाईको परिवारिक जीवनमा खटपट त परेको छैन ? सामाजिक संजालमा चितपरिचित ले खेक गणेश ज्ञवालीले तयार पारेका श्रीमतीलाई खुसी बनाउने २५ सुत्रहरूयी सुत्रहरु अपनाउनुभयो भने तपाइको परिवारमा कहिले पनि झगडा हुदैन। (१). काली, परी, माया, बेबी र मेरो महारानी भनेर बोलाउने । (२).कुनै अन्य राम्री केटी संग तुलना गर्दै नगर्ने। बरु नराम्री केटीको फ़ोटो देखाएर यो भन्दा राम्री त तिमी छौ भनी मक्ख पार्ने। (३). भूलेर पनी श्रीमतीका बाउआमाको नराम्रो पक्ष ननिकाल्दिने। सकेसम्म माईतीको कुकुर र भैसिको पनी भरपूर तारीफ गर्ने। (४).घर सफा, गर्ने, कपड़ा धुने, बजार जाने र खाना पकाउने